About | letterstoyou
This Project is composed of Portraits of cross-bordered Rohingya refugees in Bangladesh fled from Northern Myanmar since outbreake of violence, their name and their personal hand writing letters towards their missing families. When I visited the refugee camps in the November 0f 2017, I found that many have become separated from their families during the crash, desperate journey, Myanmar army’s arbitrary detention and human trafficking. According to European Union, at least 40,000 children are believed to be without at least one parent. Regardless the effort of international organizations and refugee communities, they have no way to find/contact to their loved ones, and strongly believe in the future family reunion. I asked these subjects to be photographed as if their missing family members are facing through the camera, and writealetter as if they watch it on the internet.
Due to the low rate of literacy, for those who can’t write Arakanese/Burmese text, I asked for helps to high educated local refugees who is willing to help those refugees suffering by writing for them. Each of photographs are also the Non-existed people’s finger printed physical proof of existence ,and self-made missing posters. Including my country, instant films are used in special moments such as wedding, birthday party and so on. We take photos and write emotional messages and hand them each other. This project is also the photo letter towards to us, from Rohingya refugees.
This project is launched byaJapanese artist Taro Karibe.
ဤသည်မှာစီမံကိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတွက် Cross-နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်ကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် Portraits ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်၎င်းတို့၏အမည်နှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလက်သူတို့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့မိသားစုများဆီသို့ဦးတည်အက္ခရာများရေးသားခြင်း, အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်ပွားစဉ်ကတည်းကမြောက်ပိုင်းမြန်မာကနေပြေးကြ၏။ ငါနောက်ဆုံးနိုဝင်ဘာလအတွင်းဒုက္ခသည်စခန်းသွားရောက်ကြည့်ရှုသောအခါ, ငါအများကြီးလေယာဉ်ပျက်ကျမှု, အပူတပြင်းခရီး, မြန်မာစစ်တပ်၏မတရားချုပ်နှောင်စဉ်က၎င်းတို့၏မိသားစုများကွဲကွာဖြစ်လာကြပြီတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှင့်လူကုန်ကူးမှု။ ဥရောပသမဂ္ဂအဆိုအရအနည်းဆုံး 40000 ကလေးတွေအနည်းဆုံးမိဘမပါဘဲဖြစ်ဟုယုံကြည်နေကြသည်။ မည်သို့ပင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဒုက္ခသည်အသိုင်းအဝိုင်းများ၏ကြိုးစားအားထုတ်မှု, မိမိတို့ချစ်ရသူမှ / အဆက်အသွယ်ရှာတွေ့စရာလမ်းရှိသည်, ပြင်းပြင်းထန်ထန်အနာဂတ်အတွက်မိသားစုပြန်လည်ဆုံဆည်းအတွက်ယုံကြည်ပါတယ်။ ငါသည်သူတို့၏ပျောက်ဆုံးနေမိသားစုဝင်များကင်မရာမှတစ်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေရလျှင်အဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်းကိုဤဘာသာရပ်များကိုမေးမြန်း, သူတို့သည်အင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ရှုလျှင်အဖြစ်စာတစ်စောင်ရေးပါ။
ကြောင့်စာတတ်မြောက်ရေး၏အနိမ့်မှုနှုန်းရန်, ဗမာ / ရခိုင်စာသားကိုရေးဖို့မနိုင်သောသူတို့အဘို့ငါသူတို့အဘို့အစာဖြင့်ရေးသားခံစားနေရပြီးသူတို့အားဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့ဆန္ဒရှိသူသည်မြင့်မားသောပညာတတ်ဒေသခံဒုက္ခသည်ကူညီပေးသည်များအတွက်မေးတယ်။ နိုဝင်ဘာလ 13, 2017 တွင်, မြန်မာစစ်တပ် "စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအဖွဲ့" ကအနည်းဆုံး 376 "အကြမ်းဖက်သမားများ" တိုက်ပွဲတွေစဉ်အတွင်းသေဆုံးခဲ့သည်စဉ် "အပြစ်မဲ့လူများ၏အဘယ်သူမျှမသေဆုံးမှု," ရှိရှာတွေ့မယ့်အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုင်းရင်းသားသန့်စင် '' အတုသတင်း '' သူကပြောပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေတစ်ခုချင်းစီကိုလည်းက Non-တည်ရှိလူရဲ့လက်ချောင်းဖြစ်တည်မှု၏ပုံနှိပ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထောက်အထားနှင့် Self-လုပ်ပျောက်ဆုံးနေပိုစတာဖြစ်ကြသည်။ ငါ့တိုင်းပြည်အပါအဝင်လက်ငင်းရုပ်ရှင်ကားတွေဖြစ်တဲ့ဒါပေါ်မင်္ဂလာဆောင်, မွေးနေ့ပါတီနှင့်အမျှအထူးအချိန်လေးအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ကျနော်တို့ဓာတ်ပုံများ ယူ. စိတ်ခံစားမှုမက်ဆေ့ခ်ျကိုရေးနှင့်သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားလက်။ ဤစီမံကိန်းလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များထံမှကျွန်တော်တို့ကိုဦးတည်ဓာတ်ပုံအက္ခရာဖြစ်ပါသည်။
ဤစီမံကိန်းဂျပန်ဓာတ်ပုံဆရာ Taro Karibe နေဖြင့်ဖြန့်ချိသည်။
『Letters to You』プロジェクトは、空間的に遠く離れた他者と私たちが、メディアやインターネットを通じてどう関係を結べるかについて共に考え、実践する試みです。2017年にイスラム教徒であるロヒンギャ難民が母国ミャンマー西部での迫害を受け、数十万人規模で隣国バングラデシュに大移動したニュースを写真家の苅部太郎が目にしたことをきっかけにプロジェクトが立ち上がりました。
このプロジェクトの発起人は日本人作家の苅部太郎ですが、立ち上げにあたり現地在住の通訳・コーディネーターのZia Uddin Salim氏とWPF（国際連合世界食糧計画）Shelly Thakral氏をはじめ、難民キャンプのコミュ二ティリーダーや国際機関スタッフ、ドライバー、現地警察署、ポラロイド日本支社など多くの方・組織に多大なご協力を賜りました。皆さまの一つひとつの温かい支援のお陰で取材時の安全が守られ、このプロジェクトが存在しています。全ての方のお名前をここに記載することは叶いませんが、この場を借りて深謝申し上げます。
© 2021 Letters To You Project All rights reserved.